Faah Faahin Laga Helay Heshiiska Ay Barcelona Doonayso In Philippe Coutinho Ugu Biiro Kooxda Bayern Munich. - Gool24.Net
Faah Faahin Laga Helay Heshiiska Ay Barcelona Doonayso In Philippe Coutinho Ugu Biiro Kooxda Bayern Munich.
Kooxaha Barcelona iyo Bayern Munich ayaa wada xaajood ugu jira heshiis ay suurtogal tahay in Philippe Coutinho uu dhawaan ugu wareegi karo Allianz Arena haddii wax walba ay u dhacaan sida la filayo.
Barcelona ayaa xagaagan kooxo kala duwan u soo bandhigtay saxiixa xidiga kooxdeeda ugu qaalisan ee Philippe Coutinho kaas oo ay doonayaan in uu ka baxo Cap Nou kadib muddo kooban oo uu ku soo fashilmey.
Inkasta oo ay Barcelona wax walba u samaysay sidii ay Philippe Coutinho ku keeni lahayd Camp Nou isla markaana uu ahaa xidigii taariikhda suuqa kala iisiga kooxdeeda ugu qaaisanaa, haddana waxaa socda dadaal lagu doonayo in uu maalmaha soo socda ku bixi karo.
Faah faahin laga helay wada xaajoodka u socda kooxaha Bayern Munich iyo Barcelona ee Philippe Coutinho la xidhiidha ayaa lagu ogaaday qaabka ay maamulka Barca ku doonayaan in ay xidiga reer Brazil gacmahooda kaga saaraan.
Sida uu shaaciyay wargayska Sport, Barcelona ayaa marka hore doonaysa in ay kooxda Bayern Munich amaah ku siiso Philippe Coutinho maadaama oo ay kooxda reer Germany booska xidigan baahi wayn u qabtay oo ay xidigo badan oo ay doonaysay wayday.
Arinta kowaad ee ay Barcelona doonaysaa waa in aan la qiimo ridin Philippe Coutinho waxayna Bayern Munich ka doonaysaa in ay amaah hal xili ciyaareed ah ku qaataan xidigan isla markaana ay lacag ka bixiyaan heshiiska amaahda ah iyada oo waliba ay mushaarkiisa oo dhan bixinayso Bayern.
SIDOO KALE AKHRISO: Manchester United Oo Go'aan Rasmi Ah Ka Qaadatay Soo Xerogelinta Christian Eriksen Ee Xagaagan
Laakiin Bayern Munich lagu qasbay in marka uu dhamaado heshiiska amaahda halka xili ciyaareed ahi in ay si rasmi ah ula saxiixan karaan Philippe Coutinho iyada oo taasi ku xidhnaan doonta in Barca ay qiimaha Coutinho hoos u soo dhigto.
Qodobka labaad ee ay Barcelona hor dhigtay Bayern Munich ayaa ah in ay amaah laba xili ciyaareed ah ku qaadan karaan Coutinho kaas oo la mid ah qaabkii ay James Rodriguez kagala soo wareegeen Real Madrid, waxayna markaas Bayern bixin kartaa lacag heshiiska amaahda ah iyo mushaarka Coutinho.
Waxayna Bayern Munich markale heli kartaa in labada sanadood kadib ay heshiiska amaahda ah ee Coutinho ka dhigi karto mid rasmi ah. Barcelona ayaan hadda doonayn in ay Coutinho kooxdeeda ku sii hayso maadaama oo mushaarkiisu qaali yahay isla markaana uu Valverde haysto xidigo badan oo booskiisa ka ciyaari kara.
Kooxaha Bayern Munich iyo Barcelona oo ilaa hadda wada xaajood ugu jira sidii ay heshiis uga gaadhi lahaayeen arinta Coutinho ayaan wali la ogayn nooca uu noqon doono heshiiska uu Coutinho ugu wareegi karo Germany.
Rajadii ay Barcelona ka qabtay in Coutinho uu qayb ka noqdo heshiiska ay ku doonayaan Neymar Jr ayaa hadda sii muuq beelaya inkasta oo ayna Barca ka quusan soo laabashada Neymar oo ay dadaal wayn ugu jiraan.